MAROANTSETRA : Zazavavikely 8 taona novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Noviraviraina ary novonoina ilay zazavavikely vao 8 taona monja tao amin’ny Fokontany Sadinga, Distrikan’i Maroantsetra, ny alin’ny alakamisy lasa teo. 19 décembre 2016
Voalaza fa tovolahy 18 taona no nahavanon-doza ary niharan’ny fitsaram-bahoaka ity farany ka naratra mafy vokatry ny daroka nahazo azy.
Noentin’ny Zandary notsaboina tao amin’ny hôpitaly ao an-tampon-tanànan’i Maroantsetra kosa ilay tovolahy na efa tara aza ny fahatongavan’ireo Zandary tao an-toerana . Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia efa fanaon’ilay zazavavy ny mivoaka isaky ny alina mandeha mijery fahitalavitra any amin’ny havan’izy ireo, izay tsy lavitra ny trano fonenany.
Tamin’io alakamisy io kosa anefa dia tsy tonga tamin’ilay toerana fijeriny fahitalavitra ilay zaza nefa tsy nody tany amin’ny trano misy azy ihany koa rehefa tamin’ny ora tokony ho fodiany. Kinanjo ny zoma maraina nijery azy io tamin’ilay havany ny ray aman-dren’ilay zazavavy ary dia tsy hita tao ity ary nanao fikarohana avy hatrany izy ireo sy ny fokonolona tao amin’io tanàna io izay.
Hita tao anaty bozaka tsy lavitra ny tanàna ny fatin’ilay zaza. Nahitana ratra ny vatany sy ny fivaviany ary tsy hita teny an-kodiny avokoa ny akanjony.Nisy nahatsikaritra kosa ny fihetsik’ilay tovolahy tao an-tanàna satria somary hafahafa tsy toy ny isan’andro ny fihetsiny ka nampamahamahana ny fokonolona. Avy hatrany nosamborin’ireo mponina izy ary nanotanian’izy ireo, ka avy hatrany niaiky
ny heloka vitany.
Tsy niandry ela fa avy dia raikitra ny daroka nataon’ny mponina mandra-pahatonga ny Zandary teo an-toerana.
Naratra mafy ilay nahavanon-doza ka noentina teny amin’ny hôpitaly ary rehefa sitrana izy vao mandeha ny fanadihadiana rehetra.